Ngililungisa kanjani ifayela le-dll elilahlekile? - Amafayela
Main > Amafayela > I-Qtcf.dll ayitholakali - unquma kanjani
I-Qtcf.dll ayitholakali - unquma kanjani
Ngililungisa kanjani ifayela le-dll elilahlekile?
Ungakwenza kanjanilungisai 'ilahlekile. dll ifayela'iphutha
Ungalokothi ulande ifayela le-.dll ifayela. ...
Qala kabusha i-PC yakho. Indlela elula yokwenzalungisaiilahlekile. ...
Ukubuyisa kususiweamafayela. Kwesinye isikhathi, kungenzeka ukuthi ususe ngephutha ifayela le-. ...
Uhlelo olungayilungele ikhompyutha. Izinhlelo ze-Malware zidala okungeziwe. ...
Buyisela uhlelo lwakho. ...
Faka kabushaisicelo. ...
Buyekeza abashayeli. ...
Sawubona Windows Universe! UMichael ngeThe Windows Club ukulethela enye indatshana engenayo ikhodi yephutha engekho efayeleni. Manje, iningi lemiyalezo yamaphutha umsebenzisi weWindows angahlangana nayo kubonakala sengathi ibangelwa ukungabikho kwamafayela we-DLL noma amafayela. Kulesi sihloko sizobheka ukulungiswa okuthile okujwayelekile ongakwenza futhi ungakhathazeki ngento esiyixhumanisa encazelweni engonakaliswa noma ilahleke.
I-DLL manje imele Imitapo Yezincwadi YeDynamic Link. Ezingxenyeni zethu zangaphandle zezinhlelo zokusebenza ezisebenza ku-Windows 7, 8, no-10 nezinye izinhlelo eziningi ezisebenzayo. Izinhlelo zokusebenza eziningi aziphelele ngokwazo futhi zigcina ikhodi kumafayili ahlukile.
Lapho ikhodi idingeka, ifayela elidingekayo lilayishwa kwimemori bese lisetshenziswa. Ngemuva kwalokho lokho kuvula isistimu yakho yokusebenza ngezinkinga, uma isoftware ingalitholi ifayela le-DLL okukhulunywa ngalo noma uma ifayela le-DLL lonakele lapho-ke uzothola umyalezo wokuthi lelo fayela alikho. Unezixazululo ezimbalwa ezingaba khona.
Qalisa ithuluzi lokuhlola uhlelo lwefayela elakhelwe ngaphakathi. Qalisa ukulungisa i-DIS sim noma ufake kabusha isoftware edala ikhophi yasemoyeni. Kopisha i-DLL kusuka kolunye uhlelo bese uyibuyisela kwi-PC yakho, landa amafayela e-DLL avela kumuntu wesithathu.
Indlela ephephe kunazo zonke yokulungisa iphutha le-DLL ukusebenzisa iSystem File Checker, ezongena esikhundleni samafayela alahlekile noma alimele. Manje ake sivule i-Prompt command ngamalungelo okuphatha ku-Windows 10. Bese uthayipha noma ukopishe i-athikili esiyixhumanise s f c, manje skena igama bese ushaya u-enter.
Manje thatha ibha yeSnickers ngoba kuthatha imizuzu eyi-10-15. Uma usuqedile, kufanele uqale kabusha ikhompyutha yakho. Uma inkinga ingakaxazululwa, zama ukusebenzisa i-DISM.
Ngokuyalelwa ngomyalo ngamalungelo okuphatha, thayipha i-DISM slashonline slash clean - up slash buyisela impilo, wonke amagama e-isone bese ucindezela u-Enter. Bamba enye ibha yeSnickers ngoba lokhu kuzothatha isikhashana futhi futhi lapho kuqeda ukuqala kabusha uhlelo lwakho ngemuva kokuphela. Okulandelayo, ungacabanga ukukopisha i-DLL kusuka kolunye uhlelo ngefayela elisebenzayo bese ulifaka esikhundleni senkomba efanelekile kusistimu yakho.
Lokhu kungasho ukuthi kufanele ubhalise i-DLL futhi futhi kunenketho yokuthola i-DLL kunjiniyela wesoftware bese uyilanda kuwebhusayithi yabo. Manje, uma ukhetha ukwehla ngalo mzila, qiniseka futhi angikwazi ukugcizelela lokhu ngokwanele ukuthi i-DLL ivela kunjiniyela. Lokhu kungenxa yokuthi i-DLL kungenzeka ukuthi ine-copyright futhi uma ivela kusayithi lomuntu wesithathu awukwazi ukuqinisekisa ukuthi yifayela langempela nokuthi aliphazanyiswanga noma lifakwe ngaphakathi kwe-malware.
Bese kuba khona engikubiza ngokuthi inketho yenuzi. Vele ukhiphe bese uphinde ufake isoftware futhi ngokuya ngesethingi yakho, lokhu kungaba yindlela engcono ngokwesikhathi nekhanda. Kuyinto nje okumele uyithathe njengesifanele isikhathi sethu nomzamo wethu, mina, imvamisa ngivele ngihambe ngenuzi.
Wake wahlangabezana nephutha le-dll elisabekayo? Linda, kunjalo unayo! Sazise ukuthi ukwenze kanjani lokhu emazwaneni angezansi. Ngezindatshana ezikhuluma ngakho nezinkulungwane zokunye ukulungiswa, amathiphu, amaqhinga, ama-hacks, ama-how-tos nezakamuva ze-Windows 10 izindaba, sivakashele kunkinobho yewindowsclub.com esiteshini sethu lapho sihlala sikhipha khona okuqukethwe okusha okuzokwenza impilo yakho yedijithali ibe okuncane okulula okufanele ukwenze.
Siyabonga ngokubuka futhi ube nosuku oluhle!
Ngikulungisa kanjani ukulahleka kwe-concrt140 DLL?
Ukulungisa i- 'hlengi140.njllkuyintoilahlekile”Iphutha, faka ifayili ngaphakathi kufolda yohlelo lokusebenza / yomdlalo. Ngenye indlela, ungabeka ifayela le-hlengi140.njllifayela ngaphakathi kwesiqondisi sohlelo lweWindows.
Ngilungisa kanjani i-d3dx dll ayitholakali?
Ungakwenza kanjaniLungisaIdatha ye-D3dx9_43. njllAmaphutha
Qala kabusha ikhompyutha yakho uma ungakenzi lokho. ...
Faka inguqulo yakamuva ye-Microsoft DirectX. ...
Uma ucabanga ukuthi inguqulo yakamuva ye-DirectX evela kuMicrosoft ayenzilungisai-d3dx9_43. ...
Khipha umdlalo noma uhlelo lwesoftware bese uyifaka futhi. ...
Ngakho-ke izolo ngafaka i-far-cry 3 ku-PC yami futhi lapho ngichofoza kabili kusithonjana segeyimu ngithola umyalezo wephutha onjengaleli hlelo alikwazi ukuqala ngoba i-d3dx9_43.dll ayikho ekhompyutheni yakho Sicela uzame ukufaka uhlelo kabusha ukulungisa le nkinga uma kunjalo unale nkinga, noma Uma ubhekene nale nkinga, ungayilungisa kanjani, kunezindlela ezimbili ongalanda ngazo i-dll kunoma iyiphi isayithi futhi izoba kwisikhombi sakho seSystem 32 noma i-System engizokukhombisa yona kamuva futhi unga landa i-DirectX, inguqulo yakamuva, Ithole iya ku-google doirectX download, bese uqhafaza ukuxhaswa kwesixhumanisi se-microsoft. microsoft.com Chofoza kuyo bese upheqela phansi ezansi kohlu lwamaphutha wefayela elungiswa yi-DirectX End User Runtime Package Fixes Uma unezinkinga lapho uhlelo luhluleka khona ngenxa yokuthi elinye lamafayela alandelayo alitholakali, ungakwazi ukulungisa iphutha ngokuzama i-Running DirectX Runtime Package: Manje Yini Inkinga Yami? Ngine-D3DX9_43.DLLMissingLoaring for the dll iyatholakala kuleli fayela noma chaOk, ngakho-ke leli yifayela le-DLL.
Ngakho-ke engizokwenza ngizolanda i-directXLink kule ncazelo engezansi noma ungasesha i-google ngizama ukulanda i-DirectX ngisebenzisa isiphequluli sami se-Chrome Kepha ngehlulekileBese ngikopisha isixhumanisi bese ngiyinamathisela esipheqululini seMicrosoft Edge, unamathisele, bese ilanda ngokuzenzakalela ifayela eliqalisiweLanda ifolda epheleleVula leli yifayela elilandiweQhafaza kabili ukuze ukhiphe ifayiliOk RunYesUngafunda isivumelwano selayisenseYeboSicela ukhethe indawo yokugcinaLapho ufuna ukubeka khona amafayela akhishiwe engizovula kuwo ideskithophuBrowseDesktop OkBese ufaka igama lefolda.Wonke amanye amafayela azokhonjiswa ngqo kudeskithophu yakhoNgishaye u-OK yifoldaChofoza ku-DXSETUPOKYamukela isivumelwanoNextAnd Install the programInstallation CompleteFinishBese uchofoza isithonjana segeyimu, kungenzeka sidlale, asikwazi ukubona ukuthi kwenzekani iGame iyaqala90% yesikhathi, izolungisa inkinga yakhoKodwa uma usathola iphutha le-dll, sicela ufake igama le-dll ku-google bese uzama ukulanda Ngemuva kokudlulisa amehlo kumasayithi ambalwa ngithola le dll kule webhusayithiName dlldump.comFuthi ngilanda ifayela Qaphela lapho ulanda kwiwebhusayithi engaziwa.Ngezinye izikhathi bazama ukufaka i-malware kusistimu yakho Ngemuva kokulanda, vula ifayili le-zipNgikhipha ifayela ku Leli yifayela le-dll futhi okudingeka ukwenze udinga ukukopisha ifayela kwifolda yohlelo 32 iya kudrayivu C Noma ngabe amafasitela akho afakwe kuphi c: / windows / system32 / futhi ngemuva kokukopisha ifayela le-.dll lapha nefayela isivele ikhona, ngakho-ke ngeke ngidlule, ngizoyikhansela, ngibuyele kufolda yeWindows, bese uskrolela ezansi kukhona i-syswow64, chofoza lapha bese uyinamathisela nalapha.
Ngakho-ke, yilokhu okudingeka ukwenze ukuze uxazulule inkinga yakho ye-.dll. Ngiyethemba le ndatshana ilusizo kuwe ekulungiseni inkinga ye-DirectX Futhi njengenjwayelo ngiyabonga ngokubuka i-athikili ehlobene ne-tech kulesi siteshi nsuku zonke Uma uthanda lolu hlobo lwe-athikili kufanele ubhalisele lesi siteshi.
Lokho kungisiza kakhulu. Ngakho-ke bantu, igama lami nginguLeo futhi ngiyasayina. Sihlangane endabeni yami elandelayo Kuze kube yileso sikhathi, yehlisa umoya.
isilondolozi sesikrini esiningi
Wazi kanjani ukuthi yimaphi amafayela e-DLL awekho?
Thayipha 'sfc / scannow,' bese ucindezela u-'Enter.' Uhlelo lwe- 'SystemIfayelaUhlelo lwe-Checker luzoskena uhlelo lwakho, bese lungena esikhundleniilahlekilenoma konakeleamafayelakusuka kusistimu yakho nalawo akwi-Windows disk yakho. Landela imiyalo esesibukweni. Uma usuqedile, qala kabusha ikhompyutha yakho.
Yini imininingwane efakwe kunqolobane? Ukuqinisekiswa okulondoloziwe, noma idatha ye-logon efakwe kunqolobane, ucezu lolwazi - uma kwenzeka singena ngemvume, lapho inethiwekhi ingatholakali, idatha iyaqhathaniswa, ngakho-ke kungenzeka ungene kuhlelo lokusebenza. Isinyathelo sokuqala silula, futhi lokho ukungena ngemvume.
amafayela wohlelo rempl
Amafayela wohlelo rempl - ungaxazulula kanjani
Ulilungisa kanjani igciwane kukhibhodi yakho? Zama ukukhipha isishayeli sekhibhodi, ungasayifaki okwamanje, qala kabusha ikhompyutha futhi kufanele siyifake sodwa. Uma umshayeli bekuyinkinga, lokhu kufanele kuyilungise. Uma kungenjalo, zama ukuqala ikhompyutha ku-'Modi Ephephile 'bese ubona ukuthi ungayisebenzisa yini ikhibhodi kahle ngaleso sikhathi. 2018
ukuchofoza kwegundane le-phantom
Ukuchofoza kwegundane le-Phantom - sesha izixazululo
Ngilungisa kanjani iWindows XP ephahlazekile? ukuthi ungayilungisa kanjani ifasitela le-xp elishayisekile, ngeke iqalise amawindiQalisa ikhompyutha.Njengoba ikhompyutha iqala kabusha, cindezela inkinobho F8 kaninginingi uze ubone isikrini se-Windows Advanced Izinketho.Sebenzisa izinkinobho zomcibisholo ukukhetha Khubaza ukuqala kabusha okuzenzakalelayo ekuhlulekeni kohlelo, bese ucindezela I-ENTER.